Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo Baaq u diray DMC -yada
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska iyo Xoghayaha Guud ee Dalxiiska Seychelles ayaa la kulmay dhowr shirkadood oo maareynta meelaha loo socdo ah.
Isagoo sii wata hadafkiisa ah inuu barto la -hawlgalayaasha warshadaha dalxiiska iyo waxsoosaarkooda, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska iyo Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Danjire Sylvestre Radegonde, wuxuu la kulmay dhowr shirkadood oo maareyn ah Khamiista, Ogosto 12, 2021.
Intii lagu guda jiray kulamadiisa, Wasiirku wuxuu ku baaqay in badeecada iyo adeegga la kala duwo.
Waxa kale oo uu taabtay baahida loo qabo in dhaqanka iyo hidaha Seychelles lagu daro waxyaabaha dalxiiska ee dalku bixiyo.
Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, ayaa ku wehelisay Wasiir Radegonde booqashooyinka shirarka.
Wasiir Radegonde ayaa munaasabadda u qabtay inuu ku baaqo kala -duwanaanshaha badeecadaha iyo adeegyada, isagoo tilmaamay sidoo kale baahida loo qabo in kor loo qaado waayo -aragnimada booqdaha iyada oo lagu darayo dhaqanka iyo hiddaha hiddaha ee Seychelles dalabyada dalxiiska.
Booqashadu waxay khamiistii ka bilaabatay Pure Escape, DMC oo raaxo leh oo suuqeedu ugu weyn yahay Ruushka oo xafiisyo ku leh UK, Maldives, Seychelles iyo UAE oo u fidisa baakado macaamiisheeda oo ay ku jiraan khaanadaha khaaska ah iyo hagaha dalxiiska.
Shirkadaha kale waxaa ka mid ahaa Silver Pearl Tours and Travel oo bixisa hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin safarro iyo wareejinno gaar loo leeyahay, iyo Cheung Kong Travel, oo inta badan bartilmaameedsada suuqa Shiinaha, oo siiya tilmaamo luqadeed oo khaas ah kooxda iyo dadka socdaalka ah baakadooda.
Wasiir Radegonde wuxuu kaloo la kulmay dhowr DMC oo ay Seychelles leedahay oo ay ka mid yihiin Tours Roobabka Xagaaga, kaas oo bixiya xirmooyin kala duwan iyo adeegyo kiro doon ah Sacuudi Carabiya, Ruushka iyo macaamiisha Yurub, iyo Ocean Blue Travel, oo ah shirkad qoys leeyahay, oo xiriir la leh macaamiisha UAE, Jarmalka iyada oo loo marayo mareegtooda.
DMC-yada kale ee Seychellois leedahay ee la booqday waxaa ka mid ah Welcome Travel oo bixisa baakadaha safarka ee shirkadaha, shaqsiyaadka iyo kooxaha suuqyada Yurub iyo Bariga Dhexe, iyo Luxury Travel oo xirmooyinka raaxada u fidisa suuqyada Ruushka iyo Bariga Dhexe.
“Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waajibaadkayga wasiirnimo inaan ogaado lammaanayaasha oo aan fahmo ganacsigooda. Booqashooyinkan ayaa noo oggolaanaya inaan sidoo kale muujinno qaddarinteena iyo inta badan dhiirrigelinta aan u siineyno inay ku dadaalaan inay siiyaan adeegyo iyo badeecado ka wanaagsan kuwa martidayada ah, ”ayuu yiri Wasiir Radegonde.
Ka sokow isbarashada DMC -yada, Wasiir Radegonde wuxuu iftiimiyay baahida warshaduhu u qabto kala -soocida badeecadaha iyo kor u qaadista dalxiiska dhaqanka. “Kor u qaadista dhaqanka qolofta ma aha oo kaliya inay kor u qaadeyso waaya -aragnimada dadka safarka ah laakiin waxay sidoo kale iftiimin doontaa dhaqankeenna iyo bulshada farshaxanka maxalliga ah iyo sidoo kale inay siin doonto fannaaniinta maxalliga ah madal caalami ah,” ayuu wasiirku ku nuuxnuuxsaday.
Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, oo ku wehelinaysay socdaalkan Wasiir Radegonde, ayaa sheegtay in booqashooyinka joogtada ahi waa fursad aad ku xirmi karto la -hawlgalayaasha oo aan fahmo caqabadaha, taas beddelkeeda ka caawisa Waaxda Dalxiiska inay xoogga saarto sidii kor loogu qaadi lahaa waayo -aragnimada macmiilka ee meesha loo socdo heerar kasta.
Booqashooyinka ayaa sidoo kale iftiiminaya arrimaha kala duwan iyo horumarka ka jira warshadaha dalxiiska iyo suuqyada kala duwan ee dalka.